Kooxda Tottenham oo cashar lama ilaabaan u dhigtay Arsenal, markii 2-1 ku garaacday – Jowharsport Wararka Ciyaraha
Published On: Tue, Mar 5th, 2013 Wararka Ciyaraha | By hanad Kooxda Tottenham oo cashar lama ilaabaan u dhigtay Arsenal, markii 2-1 ku garaacday
Tags Kooxda Tottenham ayaa xiratay booskeeda 3aad ee Horyaalka Ingiriiska, taasoo ah tallaabo horay ay ugu qaadeyso inay uga qeyb gasho Koobka Horyaalada Qaarada Yurub ee Champions League, kadib markii gurigeeda White Hart Lane ay cashar ugu dhigtay Arsenal.
Kooxahan ka dhisan Waqooyiga London oo uu xafiiltanka ka dhaxeeyo ayaa soo bandhigay ciyaar dar darteeda ay aad u sareysay, waxaana Tottenham markan aheyd mid aarsi iyo inay meel iska saarto Arsenal u socotay.
Tottenham ayaa saddex daqiiqo gudahood labo gool ku dhashay 10-ka daqiiqo ka hor qeybtii hore ciyaarta, waxaana goolka koowaad oo ahaa mid loo qaaday ciyaaryahan Bale uu shabaqa ku hubsaday markii ay u maleynayeen ciyaartoyda Arsenal Offside, laakiin waxaa muuqatay in Adebayor ay lug ugu jirtay calaamada Offside.
Labo daqiiqo kadib ayaa waxaa Tottenham ay heshay goolkooda labaad, waxaana ku fara yareystay Lennon oo ka faa’ideystay daafacyada Arsenal oo uu mar qudha sidii dafadii oo kale u soo dhex galay, kubad loo dhex bixiyay uu afka hore ee diilinta ka helay, isagoo u gooyay goolhayaha Arsenal, si degenaan shabaqa u dhex dhigay kubada.
Tottenham ayaa markaas wixii ka dambeeyay dareenkooda uu sii xoogeystay, waxaana saaciday garoonkooda, maadaama Arsenal ay marti ku aheyd, qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay labo gool iyo waxba oo Tottenham ku hogaamineysay.
Qeybtii labaad ayaa markii la isugu soo laabtay waxaa shan daqiiqo kadib gool rajo aheyd u dhaliyay Arsenal daafacooda Mertsacker, kaasoo ahaa kubad madax aheyd.
Arsenal ayaa dhowr jeer sigtay Tottenham waxaana goolal ay ku bar bareen kareen qasaariyay Giroud iyo Walcott, ilaa aaqirkii ciyaarta ay ku soo idlaatay natiijada 2-gool iyo 1-gool oo ay ku badisay Tottenham.
Kooxda Arsenal ayaa hada fadhida kaalinta shanaad, waxaana taas ay calaamad su’aal gelineysa halista ay ugu jirto inay ka qeyb geli weydo Tartanka Koobka Horyaalada qaarada Yurub ee Champions League oo 10-kii sano ee la soo dhaafay aanay marnaba seegin.
All Rights Reserved Copyright. © 2012, www.jowharsport.com Kooxda Tottenham oo cashar lama ilaabaan u dhigtay Arsenal, markii 2-1 ku garaacday